City iyo Jazeera oo is mari waayay & Lido VS Global oo galabta balansan
Wednesday March 27, 2013 - 14:59:39
Cayaar aad u adag oo ka mid ahayd tartanka xiddigaha kubad cagta ayaa waxaa shalay galab isaga hor yimid kooxaha ku cayaarayay magacyada hotelada kala ah City Palace hotel iyo Jazeera Palace hotel waxaana cayaartaas oo madax ka tirsan xiriirka ay daawashadeeda kasoo qeyb galeen daqiiqadihii loogu talagalay labada kooxood ay isla dhaafi waayeen bar bar dhac 1-1 ah.
Daqiiqadihii horaba cayaartu waxaa ay ku bilaabatay dar dar xoogan waxaana kooxda City Palace u suuragsahay in ay helaan goolka cayaarta lagu daahfuray kaasoo uu usaxiixay cayaaryahanka numberka-ka 11 u xirta kooxda Cabdi Naasir Cusmaan Jaamac daqiiadii 16-aad ee qeybta hore ee cayaarta.
Laakin daqiiqadii 46-aad ee cayaarta ayaa kooxda Jazeera Palace hotel ay heshay goolka bar-bar dhaca cayaarta looga dhigay kaas oo uu u dhaliyay cayaaryahanka kooxda number-ka 9-aad u xirta Daa’uud Cumar Cabdi waxaana cayaartu ay 90-kii daqiiqadood ee loogu talagalay kusoo dhamaatay bar bar dhac 1-1 ah.
Intii ay socotay cayaartii shalay ayaa qaar ka mida cayaartoyda labada kooxood la siiyay calaamadaha digniinta ee jaalaha loo yaqaano.
JAZERA PALACE HOTE FOOTBALL TEAM
Liibaan Muqtar Hassan
CITY PALACE HOTEL FOOTBALL TEAM
Jeylaani Abdullahi Mohamed
Dhanka kale waxaa cayaarta sadexaad ee tartanka galabta ku balansan kooxaha kala ah Lido Sea Food Restaurant oo ka hor tagi doonta kooxda Hotel Global. Labda maclin ayaa mid waliba sheegtay in uu cayaarta galabta dhibceheeda qaadan doono laakinse la arki doonee cida ay guushu ku raadco cayaartaas oo saacado yar kaddib bilaaban doonta.